QUUS: Hadalladii Quusta Ee Sergio Ramos Ku Tiraabay Markii Barcelona Ka Dhalisay Goolka Saddexaad Iyo Qayladiisiis Garoonka Dhexdeeda Oo Warbaahintu Shaacisay – Cadalool.com
QUUS: Hadalladii Quusta Ee Sergio Ramos Ku Tiraabay Markii Barcelona Ka Dhalisay Goolka Saddexaad Iyo Qayladiisiis Garoonka Dhexdeeda Oo Warbaahintu Shaacisay
Barcelona ayaa xalay ku garaacday garoonka Bernabeu naadiga ay sida weyn u xafiiltamaan ee Real Madrid, taas oo ay kaga dul-tallaabsatay 3-0.
Real Madrid oo qaybtii hore fiicnayd ayaa iska khasaarisay fursado badan, hase yeeshee markii lagu soo laabtay qaybta labaad ayey Barcelona ka faa’iidaysatay fursaddii ugu horreysay ee ay heshay, waxaana daqiiqaddii 50aad gool u dhaliyey Luis Suarez, ka hor intii aanu Raphael Varane iska dhalinin gool.
Daqiiqaddii 73aad ayuu Suarez ku niyad-jabiyey gool saddexaad oo ahaa rikoodhe, waxaana ay sidaas Barcelona iskaga xaadirisay finalka Copa del Rey oo saddexdii sannadood ee ugu dambeeyey ay ku guuleysanaysay.
Haddaba kabtanka Real Madrid, Sergio Ramos ayaa ciyaartoyga kooxdiisa la hadlay markii ay Barcelona goolka saddexaad la timid, waxaanu la wadaagay hadal muujinaya quusta uu taagan yahay iyo waxay tahay inay iska ilaaliyaaan.
Ramos ayaa intii ay ciyaartoyga Barcelona ku jireen dabbaal-degga goolka saddexaad, waxa uu isku dayey inuu ciyaartoyga kooxdiisa dhiirigeliyo, balse hadalka uu yidhi ayaa ahaa mid xattaa taageereyaashii garoonka fadhiyey aanay filaynin maadaama qaab-ciyaareedka guud ee Real Madrid uu ahaa mid wanaagsan.
Kabtan Sergio Ramos oo kor u qaylinaya ayaa ku yidhi laacibiinta kooxdiisa: “Yeynaan ogolaan inay inaga dhaliyaan lix gool”
Si kastaba ha ahaatee, Reeal Madrid ayaa Axadda toddobaadka soo aaddan waxay isla garoonkeeda Santiago Bernabeu kula ciyaari doontaa Barcelona kulanka labaad ee horyaalka LaLiga, kaas oo ay u baahan tahay inay guuleysato si ay lix dhibcood ugu soo koobto farqiga hoggaanka lagaga hayo.